आईओएस १२ मा आईक्लाउडमा आईफोन ब्याकअप कसरी गर्ने: द्रुत मार्गनिर्देशन! - आईफोन
किन मेरो फोन आफैंमा पुनः सुरु भयो
आईफोन6मा क्यारियर सेटिंग्स अपडेट के हो
म कसरी आईफोन बाट म्याक नोट सिंक गर्छु
एक म्याक बाट मेरो आईफोन पत्ता लगाउनुहोस्
आईफोन screen स्क्रिन कालो भयो तर फोन अझै छ
तपाईं आफ्नो आईफोनमा सबै जानकारीको जगेडा बचत गर्न चाहनुहुन्छ, तर कसरी पक्का हुनुहुन्न। एक जगेडा बिना, तपाईं आफ्नो आईफोनमा सबै जानकारी गुमाउने जोखिम चलाउनुहुन्छ। यस लेखमा, म तपाईंलाई देखाउने छु कसरी आईओएस १२ मा iCloud मा तपाइँको आईफोन ब्याकअप !
आईओएस १२ मा आईक्लाउडमा आईफोन ब्याकअप कसरी गर्ने
आईओएस १२ मा आईफोन क्लाउडमा तपाईंको आईफोन ब्याकअप गर्न, सेटि Settingsहरू खोल्न र स्क्रिनको माथि तपाईंको नाममा ट्याप गरेर सुरु गर्नुहोस्। त्यसपछि, ट्याप गर्नुहोस् आईक्लाउड ।
सुनामी सपना को अर्थ के हो?
अर्को, तल स्क्रोल गर्नुहोस् र ट्याप गर्नुहोस् आईक्लाउड ब्याकअप । निश्चित गर्नुहोस् कि पछाडि स्विच छ आईक्लाउड ब्याकअप खोलिएको छ।
अन्तमा, ट्याप गर्नुहोस् आहिले संचित गर ।
मसँग क्लाउडमा ब्याकअप गर्न पर्याप्त भण्डारण छैन!
यदि तपाईंको आईफोनसँग आईक्लोडमा ब्याकअप गर्न पर्याप्त आईक्लाउड भण्डारण ठाउँ छैन भने, तपाईंसँग दुई विकल्पहरू छन्:
फोन स्क्रिन कालो छोडिएको छ तर अझै काम गर्दछ
अतिरिक्त आईक्लाउड भण्डारण ठाउँ खरीद गर्नुहोस्।
पहिले नै आईक्लाउडमा ब्याक अप गरिएको सामग्रीहरू मेटाएर भण्डारण ठाउँ सिर्जना गर्नुहोस्।
यदि तपाईं थप आई-क्लाउड भण्डारण ठाउँ खरीद गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, कसरी हाम्रो मार्ग जाँच गर्नुहोस् आईक्लाउड ब्याकअपको लागि भुक्तानको वरिपरि पाउनुहोस् । तपाईं अझै पनि आईफोन १२ मा आईक्लाउडमा एक पैसा पनि खर्च नगरीकन ब्याकअप गर्न सक्षम हुनुहुन्छ!
यदि तपाईं बरु केही iCloud भण्डारण ठाउँ खाली गर्नुहुन्छ भने, तपाईं त्यसो गरेर त्यसो गर्न सक्नुहुनेछ सेटिंग्स -> तपाईंको नाम -> आईक्लाउड -> भण्डारण प्रबन्ध गर्नुहोस् ।
त्यसो भए, आईक क्लाउड भण्डारणबाट खाली गर्न चाहानु भएको वस्तुमा ट्याप गर्नुहोस्। अन्तमा, ट्याप गर्नुहोस् बन्द गर्नुहोस् र हटाउनुहोस् ।
दाउराको एउटा डोरीको तौल कति हुन्छ?
नोट: यदि तपाईं सन्देश वा फोटो खाली गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, तपाईंसँग आफ्नो दिमाग परिवर्तन गर्न 30० दिन हुनेछ। त्यस पछि, आईक्लाउडमा भण्डारण गरिएका सबै फोटोहरू र सन्देशहरू स्थायी रूपमा मेटिने छन्।
एकचोटि तपाईंले पर्याप्त भण्डारण खाली गरिसक्नु भएपछि, सेटिंग्समा फिर्ता जानुहोस् -> तपाईंको नाम -> आईक्लाउड -> आईक्लाउड ब्याकअप र ट्याप गर्नुहोस्। आहिले संचित गर ।
आइतबार अखबार कूपन
ब्याक अप र जान तयार छ!
तपाईंले सफलतापूर्वक आफ्नो आईफोनको ब्याक अप राख्नु भएको छ, त्यसैले आपतकालीन अवस्थामा तपाईंको सबै डाटाको बचत कम्पनी छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले यस लेखलाई सामाजिकमा साझेदारी गर्नु भएको छ तपाईंको परिवार र साथीहरूलाई आईफोन ICloud मा आईफोन 12 मा ब्याकअप गर्न मद्दत गर्न! यदि तपाईंसँग आईक्लाउड वा तपाईंको आईफोनको बारेमा अरू प्रश्नहरू छन् भने, तिनीहरूलाई तल छोड्नुहोस्।
नोट: iOS १२ हाल यसको सार्वजनिक बेटा चरणमा छ। यो आईओएस अद्यावधिक सार्वजनिक रूपमा केहि पतन २०१ 2018 मा सार्वजनिक हुनेछ।